Waa maxay Wadahadalka Taagta Yar ee Kharashka Ku Siinaya? | Martech Zone
Khamiis, Juun 23, 2015 Khamiis, Juun 23, 2015 Jenn Lisak Golding
Kuuma sheegi karo inta jeer ee aan ka soo qayb galay shir wicitaan oo ahaa waqti lumis dhammaystiran. Hadday ahaan lahayd barnaamijyo jilicsan, soo-jeediyayaal aan diyaar u ahayn, ama musiibo maqal ah, waxay lumisaa waqti iyo ilo badan. Xaqiiqdiina ma caawinayso markaan dareemo inay sidan oo kale dhacdo in ka badan boqolkiiba 30 waqtiga.
Kulan kasta - khadka tooska ah ama qof ahaaneed - waa maalgashi shirkaddaadu ku sameyso waqti, lacag iyo dhaqaale. Haddii maalgashigaasi isu rogo mid wanaagsan-marka qiimaha ka badan kharashka-waxay kuxirantahay natiijada kulanka.
Ma ogtahay in ganacsiyada yar yar ay qarash gareeyaan $ 37 bilyan sanadkiiba shirarka aan loo baahnayn? Ka fikir taas daqiiqad. Mar kasta oo aad fadhiisato kulan aan wax soo saar lahayn, shirkaddaadu macno darro ayey ku lumineysaa. Waxaanan ku dhiiran lahaa inaan sharad ku dhigo in shirar badan oo aad ka qayb gasho loo arko kuwo aan wax soo saar lahayn. Aniga oo ah milkiile ganacsi, tani waxay iga dhigeysaa mid baqdin leh.
Qaddarka lacagta ah ee ku baxa shirarka aan waxtarka lahayn sannad kasta, waa wax cajiib ah in yar ayaa dhab ahaantii isku dayaya inay xalliyaan dhibaatada. Ma haysaa tilmaamo ku saabsan sida shirarka loo qabanayo? Kulan kasta ma leeyahay ujeedo? Dadku miyay wakiilanayaan oo ay dabagal ku hayaan shirarka kadib? Haddii aad ku jawaabtay “maya” mid ka mid ah su'aalahan, markaa waa waqtigii dib loo qiimeyn lahaa sida shirarka loogu qabanayo meheraddaada.
Ganacsiyo badan ayaan wax fikrad ah ka haysan inta lacag ee ay ku bixinayaan shirarka aan wax soo saar lahayn sannad kasta. Waxaan la shaqeynay kuwayaga iskaashiga teknolojiyadda waxay kafaala qaadayaan ReadyTalk si ay u soosaaraan kalkuleytar is dhexgal ah oo ku tusi doona sida saxda ah inta aad qarash gareyso iyo waxa shirarka daciifka ahi kugu kacayaan. Xitaa waxyaabo badan oo wanaagsan, iska hubi maktabad kheyraad yaab leh.
Isku day Xisaabiyaha Wadahadalka Taagta daran ee ReadyTalk adigoo gujinaya xiriirka hoose, oo bilow inaad hagaajiso kulamadaada hadda!
Isticmaal Xisaabiyaha Wada-hadalka Taagta Daran
Bixinta: ReadyTalk waa macmiil u ah Highbridge!
Tags: shirkii maqalkacalculatorwicitaanada shirkashirka suuq geyntadiyaarsoshirarka videomadal webinar